Manandriana -Amoron’i Mania Lany tanteraka ny omby, sahirana ny mponina
Misedra olana goavana ireo mponina any Manandriana, Faritra Amoron’i Mania, toerana niavian’Itompokolahy Manandafy Rakotoniriana amin’izao.
Raha ny fanazavan-dRajaonarivelo Dieudonné, filohan’ny FIkambanana TErak’i MAnandriagna (FITEMA) dia lany tanteraka ny omby any an-toerana vokatry ny firongatry ny asan-dahalo. Lasa miasa tany amin’ny tanana ny mponina rehefa eny an-tsaha. Tsy manana zezika hambolena intsony ihany koa, ny lalana koa efa ratsy rahateo. Anisan’ny lasibatra ity filohan’ny filohan’ny FITEMA ity raha ny fanazavany. Omby 60 isa no indray noraofin’ny dahalo tao am-bala indray mandeha monja. Na izany aza dia tsy misy intsony ireo dahalo manafika amin’ny antoandro fa amin’ny alina sisa. Miezaka ny fikambanana tarihiny mametraka ireo DAS hivondronana miaramila miambina manerana ireo kaominina 10 mandrafitra ny distrika, izay efa 12 ankehitriny. Tsiahivina fa anisan’ny asa goavana notanterahin’ny fikambanana nandritra ny fisian’ny aretina pesta farany teo ny fanafarana dokotera avy any Frantsa nitsabo maimaimpoana ka olona an’arivony no nahazo tombontsoa. Nifampiarahaba nahatratra ny taona ireo mpikambana miisa 50.000 ny faran’ny herinandro teo.